China BBO kristal emeputa na Supplier | Dien
Ihe ngosi laser
Nhazi Crystal: Otu Trigonal ， Space Group R3c
Ngwakọta oke: a = b = 12.532Å, c = 12.717Å, Z = 6
Ebe na-agbaze: Ihe dịka 1095 ℃
Mohs ekweghị ekwe: 4
Njupụta: 3,85 g / cm 3
Ndị na-eme ka mgbatị ahụ gbasaa: α11 = 4 x 10-6 / K; α33 = 36x 10-6 / K
BBO bu kristal ohuru nke na-eme ka okpukpu abuo. Ọ bụ kristal na-adịghị mma nke na-adịghị mma, nke na-ejikarị ederede (ọ dịghị) buru ibu karịa mkpụrụ akwụkwọ ntanetị (ne). Ma ụdị nke m na ụdị II na-adọ abịa nwere ike ruru site n'akuku n'iji ya gee ntị.
BBO bu NLO kristal nke oma na nke abuo, nke ato na nke ano nke ndi kwekọrọ na Nd: YAG lasers, na NLO kristal kacha mma maka nkwekorita nke ise na 213nm. Ntughari arụmọrụ karịa 70% maka SHG, 60% maka THG na 50% maka 4HG, na nsonye 200 mW na 213 nm (5HG) enwetala, n'otu n'otu.
BBO bụkwa kristal na-arụ ọrụ nke ọma maka intracavity SHG nke ike dị elu Nd: YAG lasers. Maka intracavity SHG nke acousto-optic Q-Switched Nd: YAG laser, ihe karịrị 15 W nkezi ike na 532 nm sitere na BBO kristal ekpuchi AR. Mgbe ihe 600 mW SHG na-agbapụta ya nke nd: YLF laser, a na-emepụta 66 mW na 263 nm site na BBO Brewster-angle-cut na oghere dịpụrụ adịpụ.
A na-ejikwa BBO maka ngwa EO.BBO Pockels sel ma ọ bụ EO Q-Switches na-eji gbanwee ọnọdụ nke ìhè nke na-agafe na ya mgbe a na-etinye voltaji na electrodes nke kristal electro-optic dị ka BBO. Beta-Barium Borate (β-BaB2O4, BBO) na nghọta zuru oke na usoro usoro njikọ, nnukwu ọnụọgụ na-enweghị atụ, ọnụ ụzọ mbibi dị elu na mmekorita anya na ngwa ngwa anya na-enye ohere dị mma maka ngwa ngwa anya na-enweghị atụ na ngwa elektrọnik.
Akụkụ nke BBO Crystals:
• Broad phase matchable nso si 409.6 nm na 3500 nm;
• Mpaghara nnyefe sara mbara site na 190 nm ruo 3500 nm;
• Nnukwu ọnụọgụ nke ọgbọ-harmonic (SHG) dị irè dị ihe dị ka okpukpu isii karịa nke KDP kristal;
• Nnukwu mbibi dị elu;
• Ọdịdị dị elu dị elu na ≈n ≈10-6 / cm;
• Wide-bandwidth zuru oke nke ihe dị ka 55 ℃.
Ozi dị mkpa:
BBO nwere ikike dị ala nke iru mmiri. A dụrụ ndị ọrụ ọdụ ka ha nye ọnọdụ akọrọ maka ngwa na nchekwa nke BBO.
BBO dị nro dị nro ma yabụ chọrọ nlezianya iji kpuchie elu ya.
Mgbe nkenke ngbanwe dị mkpa, biko buru n'uche na nkuku nnabata nke BBO pere mpe.
Dimension ndidi (W ± 0.1mm) x (H ± 0.1mm) x (L + 0.5 / -0.1mm) (L≥2.5mm) (W ± 0.1mm) x (H ± 0.1mm) x (L + 0.1 / -0.1 mm) (L <2.5mm)
Clear oghere Central 90% nke dayameta Ọ dịghị ụzọ a na-ahụ anya a na-achụsasị anya ma ọ bụ etiti mgbe a na-enyocha laser laser 50mW
Ewepụghị erughị L / 8 @ 633nm
Mgbaghara Wavefront erughị L / 8 @ 633nm
Chamfer ≤0.2mm x 45 Celsius
Ọkọ ma ọ bụ igwu dị mma karịa 10/5 na MIL-PRF-13830B
Ndekota Seconds 20 arc sekọnd
Ndabere Minutes5 aak nkeji
Nkịtị ndidi .0.25
Zọ mbata [GW / cm2] > 1 maka 1064nm, TEM00, 10ns, 10HZ (a na-egbu maramara naanị)> 0,5 maka 1064nm, TEM00, 10ns, 10HZ (AR-mkpuchi)> 0.3 maka 532nm, TEM00, 10ns, 10HZ (AR-etinyere)
Nhazi kristal Ihe atọ ， Otu oghere R3c
Ngalaba Lattice a = b = 12.532Å, c = 12.717Å, Z = 6
Ebe mgbaze Ihe dịka 1095 ℃
Mohs ekweghị ekwe 4
Njupụta 3,85 g / cm 3
Ndị na-eme Mgbasawanye Ahụ Ọgba α11 = 4 x 10-6 / K; α33 = 36x 10-6 / K
Ndị na-eme ka ndị mmadụ na-eme ihe na-eme ka ihe dị mma C: 1.2W / m / K; // c: 1.6W / m / K
Uzo doro anya 190-3500nm
SHG adọ Matchable iche 409.6-3500nm (Pịnye m) 525-3500nm (Typedị II)
Kwes-optic Coefficients (/ ℃) dno / dT = -16.6x 10-6 / ℃
Nnukwu nnabata <0.1% / cm (na 1064nm) <1% / cm (na 532nm)
Nnabata nke mmụọ 0.8mrad · cm (θ, Pịnye M, 1064 SHG)
1.27mrad · cm (θ, Typedị II, 1064 SHG)
Nnabata Okpomọkụ 55 ℃ · cm
Nnabata Spectral 1.1nm · cm
Ije ije-apụ 2.7 Celsius (Pịnye I 1064 SHG)
3.2 Celsius (IIdị II 1064 SHG)
NLO ọnụọgụ deff (I) = d31sinθ + (d11cos3Φ- d22 sin3Φ) cosθq
Na-adịghị efu NLO susceptibilities d11 = 5.8 x d36 (KDP)
Ihe nrịba ama Sellmeier
(λ na )m) mba2 = 2.7359 + 0.01878 / (λ2-0.01822) -0.01354λ2
Elektrik-optic coefficients 22 = 2.7 elekere / V
Ọkara-ife voltaji 7 KV (na 1064 nm, 3x3x20mm3)